BurmeseBible: နှစ်သစ်အတွက်ကျမ်းချက်၊ခွန်အားယူရန်နှင့်ဆုတောင်းချက် ..Today's Scripture: 12-31-11
နှစ်သစ်အတွက်ကျမ်းချက်၊ခွန်အားယူရန်နှင့်ဆုတောင်းချက် ..Today's Scripture: 12-31-11
သူတို့ကလည်း၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏၊၊ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးလုံးသည် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လေ၏ဟု တပါးကိုတပါး ကြွေးကြော်၍ မြွက်ဆိုကြ၏၊၊ (ဟေရှာယ ၆း၃)
နှစ်သစ်ကူးအကြိုညမှာ အံ့သြမိပါတယ်။ ရှေ့ဘာဖြစ်လာမလဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့
သင်္ဘောဟောင်းကြီးနဲ့ ပင်လယ်မုန်တိုင်ကြား ခရီးသွားသလိုခံစားမိပါတယ်။
ခရီးသွားတယောက်က ဒီခရီးစိတ်ချရရဲ့လားလို့ သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကိုမေးမိတယ်။ဘွိုင်လာအိုးကရေနွေးငွေ့ယိုထွက်နေပါတယ်။ အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်ပေမဲ့ သင်္ဘောကတော့ပင်လယ်မှာသွားနေပါတယ်။ ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင်တော့ သင်္ဘောခရီးဆုံးအဆင်ပြေစွာရောက်နိုင်သလို၊ အခြေအနေဆိုးလဲကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောကတော့ ပင်လယ်ပြင်မှာသွားနေပါတယ် .. လို့ဖြေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ နောက်နှစ်ဟာ လောကအရာများမှာမှန်းထားသလိုအောင်မြင်၊အဆင်ပြေနိုင်သလို၊ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်တော့ဘ၀ခရီးကတော့ သင်္ဘောကြီးခုတ်မောင်းသလို သွားနေတုန်းပါပဲ။ အနိုမ့်ဆုံးအသက်သေသွားနိုင်သလို၊ အမြင့်ဆုံးသို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သောနှစ်က အဖြစ်အပျက်များကို သင်ခန်းစာယူပြီး ခရီးဆက်ရပါမယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကို ကျွန်ုပ်နှလုံးသားသို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး၊ အတူအသက်ရှင်ဖို့ နဲ့ ဘုရားရှင်ထံမှဥာဏ်ပညာ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကို ခံယူ၊ခရီးနှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိုအဖဘုရား၊ နှစ်သစ်ကို ကျွန်တော်အားပေးသနားတော်မူခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ဘုရားရှင်ကို အမြဲအတူရှိပြီး ကျွန်တော့အနာဂါတ်နဲ့ကျွန်တော့ဘ၀ကို ဘုရားရှင်ထံအပ်နှံပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်မှစပြီး အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ယေရှုနဲ့ နာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းပါတယ်။ အာမင်း...
“Let us know, Let us pursue the knowledge of the LORD.
Like the latter and former rain to the earth.” (Hosea 6:3 NKJ)
A PRYAER FOR TODAY
Heavenly Father, thank You so much for bringing me to the New Year! I hold on to You as my future and my life because Your going forth is established as the morning I am looking forward to. Thank You for the faith You gave to me to hold on today. In the Name of Jesus Christ - my Lord and my Savior. Amen.
Received from John Hla Aung
Posted by Witmone at 7:27 PM